३० वर्षको पुगेपछि यी खानेकुरा नखानुस्
स्वस्थ्य रहनका लागि खानपानमा विशेष हेरचाहा गर्नुपर्ने हुन्छ । धेरै मानिस पहिलो आफ्नो डाइटमा ध्यान दिदैनन र, जव शरीरमा समस्या आउन लाग्छ तव सतर्क वन्छन् ।
सामान्य अवस्थामा ३० वर्षको भएसँगै शरीरमा विभिन्न बदलावहरु आउँछन् । जस्तै क्याल्सियमको कमी, थकान तथा कपाल सेतो हुन लगायतका समस्या । यस्तैमा यस अमेरका मानिसले आफ्नो खानपानमा खास ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ । सही खानपीले यस् समस्याहरुलाई कम गर्न सकिन्छ ।
१. उमेर बढेसँगै तपाई आफ्नो कयौ बानीहरुलाई बादल्नुहु् । जस्तो कि फ्राई चिजहरुको सेवन गर्नु । आफ्नो डाइटमा मासु, अण्डा, फास्ट फूडलगायतका चीज नखानुहोस् । यसको प्रयोगले धेरै कुरामा समस्या ल्याउन सक्छ ।
२. धेरै मात्रमा नुनको प्रयोगले धेरै प्रकारका विरामीको सामना गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । ३० वर्षपछि धेरै नून खानाले किड्नी, मुटु तथा दिमागमा असर पर्छ ।
३. तपाई टमाटर सस खानलाई मन पराउनुहुन्छ भने त्यस्तो बानीलाई तत्काल छाड्नुहोस् । यसका कयौं किसिमका केमिकल मिसाइएको हुन्छ । त्यसैले तपाई त्यो केचपको प्रयोग नगर्नुहोला । पुस ११, २०७३ मा प्रकाशित